Lunch box Factory | I-China Lunch box Manufacturers, Abahlinzeki
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ihlukaniswe yaba izindawo ezimbili ukugcina ukudla, ukusetshenziswa okuhlukile kungcono ekudleni okuhlukile; Ngokubekwa uphawu okuhle, ngaphandle kokuvuza.
Isidlo sasemini Amabhokisi L-1380
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ngamabhokisi amabili wezendlalelo, angahlangabezana nezidingo zakho, ukusetshenziswa okuhlukile kungcono ekudleni okuhlukile; Ngokubekwa uphawu okuhle, ngaphandle kokuvuza.
Amabhokisi Esidlo Sasemini Amathathu L-1391
I-LONGSTAR plastic amabhokisi amathathu okudla kwasemini, enziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, kuphephile futhi kunempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ingasetshenziselwa isitsha sokudla esihlukile, ikakhulukazi esifanele abasebenzi, ngaphandle kokuvuza.
Isidlo sasemini Amabhokisi L-1379
Amabhokisi Amabili Okubeka Isidlo Sasemini L-1390
Isidlo sasemini Ibhokisi 1.2L (L) L-1389
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ngomthamo ophakeme, ungahlangabezana nezidingo zakho, ngaphandle kokuvuza.
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ngokubekwa uphawu okuhle, ngaphandle kokuvuza.
Isidlo sasemini Ibhokisi 1L (L) L-1387
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ihlukaniswe yaba izindawo ezimbili ukugcina ukudla, ukusetshenziswa okuhlukile kungcono ekudleni okuhlukile; Ngomthamo ophakeme, ungahlangabezana nezidingo zakho; Ngokubekwa uphawu okuhle, ngaphandle kokuvuza.
Isidlo sasemini Ibhokisi 0.65L (M) L-1386
Isidlo sasemini Ibhokisi 1L (L) L-1383
ILONGSTAR plastic Lunch box, yenziwa ngezinto ezisezingeni eliphakeme zokudla, iphephile futhi inempilo, futhi kulula ukuyihlanza. Ngomthamo ophakeme, ungahlangabezana nezidingo zakho; Ihlukaniswe yaba izindawo ezimbili ukugcina ukudla, ukusetshenziswa okuhlukile kungcono ekudleni okuhlukile; Ngokubekwa uphawu okuhle, ngaphandle kokuvuza.
Isidlo sasemini Ibhokisi 0.62L (M) L-1382